PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: ငိမ်းချမ်းရေးစစ်တမ်း(၁၀)။ ကေအင်ယူမှ သူငယ်ချင်းသို့ အိတ်ဖွင့်ပြန်ကြားစာ,
ရေဒီယို အင်တာဗျူး၊ ဥပဒေကြောင်း သုံးသပ်ချက်တွေကို အသိအမှတ်ပြု အားပေးလေ့ရှိသူတွေထဲက တဦးပါ။ကိုယ်လဲ သူ့ ကို တလေးတစား ဆက်ဆန်ခဲ့တာဘဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေး တကယ်ရစေခြင်တဲ့ စေတနာ သူ့ မှာ ရှိမယ်ဆိုတာ ကိုယ်ယုံ ကြည်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်း။ စေတနာတခု ထဲနဲ့ ဆိုရင်တော့ ပြသနာတက်တတ်တယ် လေ။ အဖေ့ရဲ့ နဖူးပေါ် မှာ မှက်တကောင်ကိုက်နေလို့ အဖေ့အပေါ်စေတနာ ထားပြီး သားဖြစ်သူက အဲဒီ မှက် ကို သစ်ခုတ်တဲ့ ပုဆိန်နဲ့ ထခုတ်၊ မှက်က အသာလေးပျံထွက်သွား၊ အဖေကတော့ ပုဆိန်လက်ချက် နဲ့ အသက်ထွက် သွားခဲ့ရတဲ့ သစ်ခုတ်သမား သားအဖ ပုံပြင်ကို သူငယ်ချင်း မှတ်မိတယ် မဟုတ်လား။
​အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုး စောကွယ်ထူးဝင်း နဲ့ လဲ ၁၉၉၃ ခုနှစ် သူ ဘိတ် ထားဝယ်ခရိုင်မှာ ခရိုင်ဥက္ကဌ လုပ်ခဲ့စဉ်ကထဲက တစုံတရာ ရင်းနှီးခဲ့ကြသူတွေဘဲ။ သူ အကူအညီတောင်းလို့ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာထဲက Landfall ကျွန်းပေါ်မှာ အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ကေအင်ယူ ရဲဘော် ၁၁ ဦးနဲ့ရခိုင်တပ်မတော်က ရဲ ဘော် ၂၅ ဦးလွတ်မြောက်ရေး အတွက် အဲဒီတုံးက အိန္ဒိယ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး George Fernandes အိမ်အရောက်သွား၊ သူနဲ့ တွေ့ ခွင့်မရမချင်း ထိုင်စောင့်၊ ည ၁၂ နာရီလောက်မှ တွေ့ ခွင့်ရ၊ ပြောခွင့်လဲ ရခဲ့၊ တစိပ်တပိုင်း နိုင်သလောက်လေးတော့ အဲသည်လို ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်း ပေးခဲ့တာပါ။
​ဓါတ်ပုံထဲက ဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးမှာ ရှိနေသူ ကေအင်ယူရဲ့ လက်ရှိ ကာကွယ်ရေးဌာနတာဝန်ခံ စောရော်ဂျာ ခင် ဆိုရင် မာနယ်ပလောတော်လှန်စစ်ကာလ နှစ်တချို့ အတွင်း အနေနီးနီးကပ်ကပ်ရှိခဲ့ကြပြီး အခက်အခဲတွေကို အတူ တကွ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ လူကြီးတွေကသာ တာဝန်ပေးရင် သုံးနှစ်လောက် မပြန်တမ်းရှေ့တန်းထွက်ပြီးတော်လှန်ရေး ကို ပြီးအောင်လုပ်ခြင်သဗျာ လို့ မကြာမကြာပြောတတ်လို့ ကိုယ်အပါအ၀င် သူနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ရဲဘော်တွေက သူ့ ကို တန်ဘိုးထားခဲ့ကြပါတယ်။
​ဒါတွေ ပြန်ပြောနေတာ တခြားကြောင့်မဟုတ်။ အခုလတချို့ အတွင်း ကေအင်ယူကို အတိအလင်း ဝေဘန်သူ တွေအနက် ရှေ့ တန်းနေရာမှာ ကိုယ်ရှိလာလို့ မင်းကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ဆီကို အခုလိုအိပ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးလာရတယ် မဟုတ် လား။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်း။ ဒီ ဝေဘန်ချက် တွေမှန်သမျှဟာ မရိုးမသား တခုမျှမပါ။ ကေအင်ယူကောင်းစေခြင်တဲ့ စေတနာ အခြေခံကနေ တပြည်လုံးမှာ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရသွားစေခြင်လို့ဆိုတာကို တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုံရဲ့ရှေ့ တန်းနဲ့ လက်တကမ်း မှာ ရှိနေတဲ့ မင်းကိုယ်တိုင် ပြန်လည် စဉ်းစားစေခြင်လို့ ပါဘဲ။
​ကဲ အခု မင်းရေးတဲ့စာထဲက အရေးကြီးတဲ့ အချက်အချို့ ကို ပြန်လည်တုန့် ပြန်ပါမယ်။ မင်းက သည်လို ရေးခဲ့တယ် မဟုတ်လား။
“သူငယ်ချင်း မင်းမှတ်မိသေးမယ်လို့ထင်တယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဗိုလ်မြက KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့  ခေါင်းဆောင်၊ ကိုယ်ကဒုတိယအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အနေနဲ့ ယခင် နအဖ နဲ့တွေ့ဆုံဖို့မသွားခင် မင်းငါ့ကို မဲဆောက်မှာပြောသွားတဲ့ စကားလေ။ "မင်းတို့မှားလိမ့်မယ်" တဲ့။”
မင်းရဲ့ အဲသည်စကားကို ပြန်တုန့် ပြန်ပါရစေ။"မင်းတို့မှားလိမ့်မယ်" လို့ကိုယ်ပြောခဲ့တာ မှတ်မိ တာပေါ့ 
သူငယ်ချင်း။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြ ဦးဆောင်တဲ့ မင်းတို့ တဖွဲ့ လုံးရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရည်မှန်းချက်ကို တန် ဘိုးထားပေမယ့် မဟာဗျူဟာအရတော့ လွဲသွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ အခြေအနေနှစ်ရပ်ကို ချိုးဖေါက်ရာရောက်သွား ခဲ့လို့ ဘဲ။
(၁) တပ်ပေါင်းစုနဲ့ ဘဲ ဆွေးနွေးမယ် ဆိုတဲ့ မူကို ကေအင်ယူ ကိုယ်တိုင် ချိုးဖေါက်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတယ်။
အပြစ်တင်တာမဟုတ်။ နောက်ဆုံးမှာကေအင်ယူကိုယ်တိုင် အခြေအနေရဲ တွန်းပို့ ခြင်းကို အဲသည်တုံး ကခံလိုက်ရတာကို နားလည်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလက်ရှိအခြေအနေက တပ်ပေါင်းစု နဲ့ စုစုစည်း စည်း တောင့်တောင့်တင်းတင်းဆွေးနွေးခွင့်ရနေပါရက်နဲ့ အဲသည်စည်းဝိုင်းကနေ ထွက်ဘို့ ကြိုးစား တာ မျိုးဖြစ်နေတယ်။ ဒါကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး ထင်တယ်။
(၂) တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရနဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို တပ်ပေါင်းစုက စတောင်းခဲ့တာပါ။
ကိုယ်မှတ်မိသလောက်ကတော့ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ် အဖွဲ့ ချုပ် (DAB) အားကောင်းစဉ် အချိန်တုံးကပေါ့။ အဲသည်တောင်းဆိုချက်အောက်မှာ ရလို့ ကေအင်ယူက သွားရောက်ဆွေးနွေးတာမျိုး ဆိုရင်ဒုံဇရစ် တပ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲလိုမျိုး ပြသနာမတက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။
အဲသည် မဟာဗျူဟာ အားနည်းချက်ရဲ့ အကျိုးဆက်ကို မင်းစာရဲ့ စာမျက်နှာ ၂ မှာ “နှစ်နှစ်လောက် တိုက်ပွဲ မဖြစ်လို့ လူထုတွေ သက်သာရာရတယ်” ဆိုတဲ့ ချွင်းချက်ကလွဲလို့သူငယ်ချင်းကိုယ်တိုင် အောက်ပါအတိုင်း ၀န်ခံထားခဲ့ရတယ် မဟုတ်လား။
“အကျဉ်းချုပ် သုံးသပ်ကြည့်ရင်အဲဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေက ဘာအဖြေမှမယ်မယ်ရရ မထွက်ခဲ့ ပါဘူး။လူကြီးလူကောင်းသဘောတူညီချက်လို့ခေါ်တဲ့Gentlemen Agreement နဲ့ဘဲ လုပ်သွားကြရတယ်။”
အဲသည် လူကြီးလူကောင်း သဘောတူညီချက်ကလက်တွေ့ မှာ ပြသနာ တလျှောက်လုံးတက်ခဲ့တာ ပေါ့။ မင်းကိုယ်တိုင် အဓိကကျတဲ့ တဒေါင့်တနေရာကနေ ပါဝင်ပြီး ကေအင်ယူနဲ့ စစ်အစိုးရတို့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ(၁၂) ရက်နေ့ မှာ ချုပ်ခဲ့တဲ့အပစ်ရပ်စာချုပ်ထဲမှာလဲ လူကြီးလူကောင်းသဘောတူညီချက်သာသာ ဘဲရှိခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ သူငယ်ချင်းလဲ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဥပဒေဌာန B.A (Law) LL.B First Batch ကနေဆင်းလာတဲ့ဥပဒေသမား တဦးဘဲ။ စာချုပ်တခုကိုချုပ်ဆိုတဲ့အခါမှာ တဘက်ဘက်ကနေ အလွယ်တကူ မချိုး ဖေါက်ရဲအောင်၊ ချိုးဖေါက်ခဲ့ သည်ရှိသော် ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ဥပဒေသဘော ဆောင်တဲ့ အခြေခံကနေ စည်းနှောင်အားBinding Force ထည့်ပေးရမှာကို တို့ နားလည်ကြတာဘဲ။ အဲသည်အတိုင်းလုပ်ခဲ့ရဲ့ လားဆိုတာ ကေအင်ယူနဲ့စစ်အစိုးရ ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ စာချုပ်အပေါ် လူထုတရပ်လုံးလေ့လာခွင့်ရအောင် ထုတ်ပြန်ပေးပါလား သူငယ်ချင်း။
သာဓက တခုကနေ စတင်ဆွေးနွေးပါမယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်စက်တင်္ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ က မြ၀တီမှာ ကေအင်ယူတပ်မဟာ ၆ က စောတာနိ ဆိုတဲ့ ရဲဘော်တဦးကို စစ်အစိုးရရဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်က ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီး သတ်ပစ်လိုက်တာ အထင်အရှားဘဲ မဟုတ် လား။ သူ့ အလောင်းမှာ လက်ထိပ်တန်းလန်းကြီးနဲ့ ဘဲ။ ကရင်ကို ကရင်က သတ်တဲ့ဇာတ်လမ်းဖန်တည်းထားပေမယ့် ဒါဟာ စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေ လက်ချက် ဆိုတာတွက်လို့ ၇နိုင်တာဘဲ။ ကျဆုံးသွားတဲ့ ကရင်ရဲဘော်နဲ့ သူ့ မိသားစု အပေါ်ဂရုဏာရိုးရိုးထားပြီး နိုင်းယှဉ်ထောက်ပြမယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာလူငယ်နှစ်ဦးက အင်္ဂလိပ်နှစ်ဦးကို သတ်တယ်လို့စွပ်စွဲခံရတဲ့ အမှုမှာ စစ်အစိုးရအာဏာ ပိုင်တွေက ထိထိရောက်ရောက်နောက်ကလိုက်ပေးနေတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ တစုံတရာတိုးတက်လာတယ်လို့ ပြော နိုင်တယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မေလ ၁၄ ရက်နေ့ တုံးက မဲဆောက်မြို့ အနီးမှာ မြန်မာ ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမား ၆ ဦးအသတ်ခံ ခဲ့ရတုံးက ဘန်ကောက်ပို့ စ် နဲ့ နေးရှင်းသတင်းစာကြီးတွေမှာ ပါခဲ့တာတောင် စစ်အစိုးရက ဘာမှ လုပ်မပေးခဲ့တာဘဲ။ အဲသည်တုံးက မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီကို ကိုယ်ဦးဆောင်ခဲ့တုံးဖြစ်တော့ ထိုင်းရှေ့နေအသင်း ၊ ထိုင်းလူ့ အခွင့် အရေးအဖွဲ့ တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေ နှစ်ကြီးပြစ်ဒဏ်ကျခံသွားရအောင် ကြိုးပမ်းပေးနိုင်ခဲ့ တယ်။ ဒါ ထားပါတော့။
အခုမျက်မှောက်အချိန်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာလူငယ်နှစ်ဦးအဖမ်းခံ၊ စွပ်စွဲခံရရုံနဲ့ သူတို့ ရဲ့အမှုမှန်ပေါ်ရေး အတွက် တကမ္ဘာလုံးသိအောင် ကြေငြာပြီး စစ်အစိုးရက ထိထိ ရောက်ရောက် နောက်က လိုက်ပေးနေတဲ့ တချိန်ထဲ လိုလိုမှာဘဲ မြန်မာနိုင်ငံက မြ၀တီ မြို့ မှာ ကေအင်ယူက ကရင် လူငယ်တဦးအသတ်ခံရတဲ့ ကိစ္စ အမှုမှန်ပေါ်ရေး အတွက် တကမ္ဘာလုံးသိအောင် ကြေငြာပြီး ဘာကြောင့် လိုက်မပေးသလဲ။ ကရင်တယောက်ရဲ့ အသက်ဟာ မြန်မာ ထက်ပိုပြီး ဈေးပေါနေလို့ လား။ စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေက ကရင်နဲ့ ကရင်အကြားမှာ ပြသနာ တက်အောင် ကြိုတင် စီစဉ်ပြီး သတ်လိုက်တဲ့မှုခင်းဖြစ်လို့ မသိခြင်ယောင်ဆောင်နေတာလား။
ဒီသံသယတွေ ပျောက်စေခြင်ရင် တရားမျှတတဲ့ တရားခွင် Fair Trial အခွင့်အရေးကို ဘာကြောင့်ဖန်တည်း မပေးသလဲ။ အမှုဖြစ်စဉ်အစအဆုံး၊ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကို လူထုတ၇ပ်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင် သတင်း တွေ ဘာကြောင့် ပေါ်ထွက်မလာ သလဲ။ အဲသည်လို ပေါ်ထွက်လာအောင် ကေအင်ယူကရော ဘာတွေဖိအားပေး လုပ် ဆောင်ပြီး ဘာတွေ အခက်အခဲ ရှိနေသလဲ။ ဒီကိစ္စအမှုမှန်ပေါ်အောင်နဲ့ အထက်က အမိန့် ပေးသူကိုပါ အရေးယူနိုင် အောင် ၀ါရင့်ဥပဒေသမားတဦးလဲဖြစ်၊ ကေအင်ယူရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ လဲ တလျှောက်လုံးအတူ လုပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းအနေနဲ့ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ထားသလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ကို အသိမပေးနိုင်ဘူးလား။
ဒါက သာဓက တမှုဘဲရှိပါသေးတယ်။ ကေအင်န်အယ်အေသာမကဘဲ ကေအင်ဒီအို စစ်သားတွေပါ အသတ်ခံ ရတဲ့ အခြားအမှုတွေ အတော်များများရှိပါသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းက ပိုပြီး သိမှာပါ။ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်း တို့ ရဲဘော်တွေကိုယ်တိုင်တောင်မှ အသက်ရှင်သန်ခွင့် အာမခံချက်မရှိရင် ရိုးရိုးကရင်လူထုတွေရဲ့ ဘ၀က ဘယ်လိုနေ မလဲ။ ဒီလိုဆိုးဝါးတဲ့မှုခင်းမျိုးတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာပံ့ပိုးပေးနိုင်ဘို့ကိုယ်တို့ ရဲ့ ဥပဒေအထောက်အကူပြု ကွန်ရက်နဲ့ ပါ လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ကြ မယ်ဆိုရင် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် တစုံတရာ အကျိုးဖြစ်နိုင်မယ်လို့ စဉ်းစား စေခြင်တယ်။ စစ်အစိုး၇ ငြိုငြင်မှာကြောက်လို့ကိုယ်တို့ နဲ့ လက်မတွဲရဲဘူး ဆိုရင်တော့လည်း ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။
ကေအင်ယူနဲ့ စစ်အစိုးရတို့ လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့ အပစ်ရပ်စာချုပ်မှာ ဒီလိုပြသနာတွေ ပေါ်လာရင် ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် ယန္တယားတွေ ပါရဲ့ လား။ ပါတယ် ဆိုရင် ဘာကြောင့် မသုံးသလဲ။ ကရင်လူထုတရပ်လုံး သိအောင် ထုတ်ပြန်ပေးပါလား။ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှာ ရှိနေကြတဲ့ ကရင်လူထုတွေ အနေနဲ့ ဝိုင်းပြီး ဖိအားပေးကြမယ် ဆိုရင် နယ်ခြားစောင့်တပ်က ကရင်စစ်သားအချို့ ကို လက်ညှိုးထိုးပြပြီး အမှုပိတ်သွားတာမျိုး မဖြစ်တော့ဘဲ၊ အမှုမှန် ပေါ်လာပြီး နောင်ကို ဒါမျိုး မဖြစ်အောင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရာ ရောက်မယ် မဟုတ်လား။ ဒါမှသာ ဥပဒေစိုးမိုးရေး ကို အထောက် အပံ့ဖြစ်စေမှာပေါ့။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိမှသာ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလား သူငယ် ချင်း။
သူငယ်ချင်းဆီကို စာရေးနေစဉ်မှာတင် သတင်းဝင်လာတယ်။ အလွတ်သတင်းထောက် ကိုအောင်ကျော်နိုင် ခေါ် ကိုပါကြီးဆိုသူဟာ ဒီကေဘီအေ ဒေသတွေကနေ သတင်းယူပြီးအပြန်လမ်းမှာ စစ်အစိုးရရဲ့ ကျိုက်မရော အခြေစိုက် ခြေမြန်တပ်ရင်း ၂၀၈ က ဖမ်းပြီးသတ်ပစ်လိုက်ပြန်ပြီ ဆိုပါလား။ ဒီသတင်းမှန်ရင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းတွေ ရှိတဲ့နေရာကို သတင်းထောက်တွေ မလာရဲအောင် လုပ်လိုက်တာ မဟုတ်ဘူးလား။ ဒီလိုဆိုရင် လူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဘ၀အမှန်တရားတွေကို ဘယ်သူတွေက ဖေါ်ထုတ်ပေးကြဦးမှာလဲ။ ဒီလို ဥပဒေမဲ့
သတ်ဖြတ်မှုတွေ ရှိနေတော့ ဥပဒေစိုးမိုးရေးပျက်တော့တာပေါ့။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ရနိုင်ပါ့မလဲ။
“အမေရိကန် သမ္မတကြီး Franklin D. Roosevelt ရဲ့စကားနဲ့ "I kill my enemy by making him my friend" ဆိုတဲ့ အမေရိကန် သမ္မတကြီး Abraham Lincoln ရဲ့စကားဟာ ကိုယ့်ရဲ့လက်စွဲပဲ” လို့ မင်းရဲ့ပေး စာမှာတွေ့ရတယ်။ ဒါကို အခြေခံအားဖြင့် မငြင်းပါဘူး သူငယ်ချင်း။ ဒါပေမယ့် ရန်သူကို မိတ်ဆွေဖြစ် အောင်လုပ်ရုံနဲ့ ၊ရန်သူနဲ့လက်ဆွဲနုတ်ဆက်ပြီး ဓါတ်ပုံတွေအတူတွဲရိုက်ကြရုံနဲ့ တော့ ငြိမ်းချမ်းရေး မရနိုင်ဘူးသူငယ်ချင်း။ ဥပဒေစိုးမိုးရေး တကယ်တန်းရှိမှသာငြိမ်းချမ်းရေးကို မြှော်မှန်းနိုင်မယ်။ အဲဒီ အမေရိကန် သမတကြီးကို သူ့ ရန်သူကဘဲ သတ်လို့ သေ သွားခဲ့ရတာ ကြည့်ပါ။ (အမေရိကန်လို ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံမှာ ထက် မြန်မာနိုင်ငံလို စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးစိုးနေတဲ့ နိုင်ငံမှာ) ဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာ အဆတရာလောက်ပိုပြီး အရေး ကြီးကြောင်း သူငယ်ချင်း သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းက ဆက်ပြီးရေးပြသေးတယ်။
“ကိုယ့်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး အဆိုအမိန့်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့Commander in Chief ပြောတဲ့ "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." – Matthew5:9(NIV).”
ဒါကိုလဲ ကိုယ်မငြင်းပါဘူး။ တခုတော့ရှိတယ်။ ဘာသာရေးက ရှာဖွေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ လူ့ အဖွဲ့အစည်း တရားမျှတ၊ လွတ်လပ်၊ တည်ငြိမ်၊တိုးတက်၊ ဖွံ့ ဖြိုးဘို့ လိုအပ်လို့ရှာဖွေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး၊ သည်နှစ်ခု က တထပ်တည်းကျပါ့မလား။ သူငယ်ချင်း စဉ်းစားစေခြင်တယ်။ နောက်တခုက စစ်အစိုးရနဲ့ စာပွဲဝိုင်းမှာ ဆွေးနွေးတာ၊ နေပြည်တော်ကို သွားပြီးဆွေးနွေးတာတွေဟာ အရေးမကြီးမဟုတ် ကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သည်အရာတွေလောက်ကိုဘဲလုပ်နေရုံနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရှာဖွေသူ၊ တည်ဆောက်သူရယ်လို့ ပြောနိုင်ပါ့မလား။
သူငယ်ချင်းတို့ ကအစည်းအဝေးခန်းကျယ်ကျယ်ကြီးရဲ့ စားပွဲခန့် ကြီးတွေမှာစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် တွေနဲ့ 
အစားအသောက်ကောင်းကလေးတွေ စားပြီး အေးအေးဆေးဆေး ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ အချိန်မှာ ပြင်ပလူ့ အဖွဲ့ အစည်း အတွင်းမှာအထက်ကပြောခဲ့သလို ဖိနှိပ်မှု၊ သတ်ဖြတ်မှု၊ ရက်စက်မှု၊ မတရားမှုတွေ အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေရင်၊ ပြီးတော့ စစ်အစိုးရက သူကြိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး စစ်ပွဲတွေထ ဆင်နွှဲနေရင် ဒါဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်း ကြောင်းအမှန် ဟုတ်ပါ့ မလား။ ဒါတွေကို စစ်အစိုးရခေါင်း ဆောင်တွေ ငြိုငြင်မှာ စိုးလို့လူထုတွေ သိအောင်တောင် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် မပြောရဲဘူးဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေး ရှာဖွေ၇ာရောက်ပါ့မလား။
ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကဘာလဲ။ သူငယ်ချင်း ကိုယ့်ကို ပြောပြပေးပါလား။ (တနိုင်ငံလုံးဖြစ်စေ၊ ကရင်ပြည် နယ်အတွင်းမှာဖြစ်စေ) အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးရုံနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ တော့ မပြောနဲ့ နော်။ ဒီလိုပြောမယ် ဆိုရင် စစ်အစိုးရအကြိုက်ဖြစ်မှာသေချာပေမယ့် တိုင်းရင်းသား လူငယ်လေးတွေတောင် ယုံဘို့ မလွယ်တော့လို့ ဘဲ။
ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စကို ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တည်းခွင့် အခြေခံကနေ ဆက်ပြီးဆွေးနွေးပါမယ်။
ကရင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင် စောဘဦးကြီး မိန့် ကြားသွားတဲ့ ကရင့်ကြမ္မာ ကရင်ဖန်တည်းခွင့် ဆိုတာကို ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု အခြေခံကနေကြည့်ရင် ကရင်ပြည်နယ်အပါအ၀င် ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့ စည်းရာမှာ ပါဝင်မယ့် ပြည်နယ်တွေမှာ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တည်းခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေရှိရမယ် မဟုတ်လား။ မင်းဒါကိုလက်ခံရင် သူငယ်ချင်းတို့ ဆွေးနွေးပွဲလုပ်နေကြတဲ့ သုံးနှစ်လောက်အတွင်းမှာ တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေ ရဲ့ အဲသည် အခွင့်အရေးအပေါ်ထိပါးတဲ့ ဥပဒေတွေကို စစ်အစိုးရရဲ့ လွှတ်တော်တွေက အတော်များများပြဌာန်းခဲ့တာ၊ ပြဌာန်းနေတာတွေကို ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ မင်းတို့ ကေအင်ယူ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နေပြည်တော်ကို သွားပြီး တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ခြောက်ကြိမ်အတွင်း တကြိမ်မှာ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ တွေ့ ခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ဘို့ သူ သဘောတူကြောင်း ထပ်ခါတလဲလဲပြောနေတဲ့ ဦးရွှေမန်းကို ခင်ဗျား တို့ လွှတ်တော်က ဖက်ဒရယ်အခြေခံနဲ့ ဆန့် ကျင်တဲ့ ဥပဒေတွေ ဘာကြောင့် အထပ်ထပ် ပြဌာန်းနေတာလဲလို့သူငယ်ချင်းကိုယ်တိုင်မေးခဲ့တာ ရှိသလား။ သူငယ်ချင်းတို့ ဥက္ကဌကြီးမေးဘို့ ရော အကြံပေးခဲ့တာ ရှိသလား။ မေးခဲ့ရင် ဦးရွှေမန်းဘာဖြေသလဲ။ ကရင်လူထုရော ကိုယ်ပါ သိရှိခွင့်ရအောင် ထုတ်ဖေါ်ပေးရင်ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒါတွေက ခိုင်မာတဲ့ တပ်ပေါင်းစု တခုရဲ့အလံအောက်ကနေ စုပေါင်းတောင်းဆိုမှသာ ရနိုင်မှာပါ။ သူငယ်ချင်း တို့ ကေအင်ယူ တဖွဲ့ တည်းအနေနဲ့ နေပြည်တော်ကို သွားပြီး ခြောက်ကြိမ်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပြီ။ လက်တွေ့ အရ ကရင် လူထု အတွက် အခိုင်အမာအခွင့်အရေး (Rights) တွေ ပေးမယ်လို့ စာနဲ့ ပေနဲ့ အာမခံချက်ဘာရသလဲ ပြောပါ။ တနိုင်ငံ လုံး အပစ်ရပ်စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးပြီးရင် အခွင့်အလမ်း(Opportunities) တွေ ဟိုဟာလေးပေးမယ်၊ သည်ဟာလေး ပေးမယ်လို့ နုတ်နဲ့ ရွတ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ ယုံစားပြီး ကေအင်ယူတခုလုံး အသုံးချခံလိုက်ရတဲ့ ဘ၀မျိုး မရောက်စေခြင်ဘူး။
လက်ထဲက ငှက်တကောင် နဲ့ ခြုံပုပ်ထဲက ငှက်နှစ်ကောင် ဥပမာကို ပြန်စဉ်းစားစေခြင်တယ်။ အခုလောလော ဆယ် စစ်အစိုးရကတဘက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ အစည်းတွေကတဘက် ဘက်နှစ်ဘက် ဆွေးနွေးခွင့်ရနေတဲ့အခြေအနေဟာ လက်ထဲက ငှက်တကောင်ဘဲ။ အခုရရှိထားတာကသေချာတဲ့ အခွင့် အလမ်းဘဲ။ လာမယ့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုတာက ခြုံပုပ်ထဲက ငှက်နှစ်ကောင်ဘဲ။ ဆောက်ဖြစ်မှ ကျောင်းဒကာ မသေချာတဲ့ အခွင့်အလမ်းဘဲ။ စစ်အစိုးရက သူတို့ လိုခြင်တဲ့ တနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်စာချုပ်ကို ရသွားပြီး ရင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ဆိုတာကို(အမျိုးသားညီလာခံတုံးက ၁၅ နှစ် အချိန်ဆွဲခဲ့သလို) နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်လောက် အချိန်ယူပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆက်လက်တည်မြဲအောင်လုပ်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။
တနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်စာချုပ်ကို ကေအင်ယူအနေနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ အလွယ်တကူ လက်မှတ်ထိုးခြင်တာလဲ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၁၂) ရက်နေ့ မှာ အဲသလို လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ အဲဒီ စာချုပ်က အခုဘာပြသနာကိုမှ မရှင်းနိုင်တာဘဲ။ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ချော့မော့လို့ ရရင် သူတို့ စိတ်ကြည်လင်ရင် ၇မယ့် သက်သာခွင့် (Easement) လောက်ရှိတာ ဘဲ။ စာချုပ်အရ ထမ်းဆောင်ရမယ့်တာဝန်(Obligation) အပေါ်အခြေခံပြီးရတဲ့ အခွင့်အရေး(Rights) မဟုတ်တော့ အခိုင်အမာ တောင်းဆိုအရေးယူလို့ မရဘူး မဟုတ်လား သူငယ်ချင်း။
တနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်စာချုပ်ကို အလွယ်တကူ လက်မှတ်မထိုးဘဲ တိုင်းရင်းသား ပြည်နယ်တွေ ရသင့်ရထိုက် တဲ့ အခွင့်အရေး အခြေခံကျောရိုးတချို့လောက်ကို တခါထဲကျအောင်ဆွေးနွေးဘို့ လိုမှာပါ။ ပါသင့်ပါထိုက်တဲ့ နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေး အချို့ မျှဖြစ်တယ်။ အဲဒါအပြင် လူထုကို ကာကွယ်ပေးမယ့် လူ့ အခွင့်အေ၇း၊ သဘာဝသယံဇာတဆိုင်ရာ ပူးတွဲ စီမံခန့် ခွဲခွင့်၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် တည်ဆောက်ရေး အာမခံချက်တွေ အနည်းဆုံးအားဖြင့်ပါတဲ့ စာချုပ်ဖြစ်စေ ခြင်တယ်။ အဲဒါတွေ ပါပြီးတဲ့ စာချုပ်ကို(အခုမျက်မှောက်မှာဖြစ်ပျက်နေသလို) အလွယ်တကူ ချိုးဖေါက် တာမျိုး ခွင့်မပြုသင့်ဘူး။ ဒါကြောင့် ချိုးဖေါက်မှုတွေ မှန်သမျှကို ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင် ရွက်ခွင့်ရမယ့် ယန္တယား တွေ၊ နိုင်ငံ တကာရဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေ ရှိလာအောင် ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုဘို့ လိုမှာပါ။ ဒီလို ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ် Peace Agreement မျိုး ပေါ်ထွက်လာဘို့စဉ်းစားစေခြင်တယ်။
တပ်ပေါင်းစု ယူအင်န်အက်ဖ်စီ နဲ့ အခြားတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းတွေ ပူးပေါင်းကြပြီးတော့ ဒီလို စိုးရိမ်ချက်တွေ အပေါ်အခြေခံပြီး အလွယ်တကူလက်မှတ်မထိုးဘဲ ခိုင်မာတဲ့ သဘောတူညီချက် တွေရအောင် တဆင့်ပြီးတဆင့် ဆွေးနွေး ဘို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင် သူတို့ ကို ငြိမ်းချမ်းရေး မလိုလားသူ၊ သဘောထားတင်းမာသူ (Hardliners) တွေ ဖြစ်တယ်ရယ်လို့ စွပ်စွဲမယ်ဆိုရင် မှန်ပါ့ မလား သူငယ်ချင်း။
ယူအင်န်အက်ဖ်စီ တပ်ပေါင်းစု စတင်ဖွဲ့ စည်းတုံးက ကိုယ်မပါခဲ့ လို့ ဒီကိစ္စ ဘာမှ မပြောလိုဘူး။ ဒါပေမယ့် ယူအင်န်အက်ဖ်စီ ဖွဲ့ စည်းပုံကို ကြည့်ပြီးပြီ။ နိုင်ငံရေးအရ ဦးဆောင်မှုကို ရှာဖွေရာမှာ တသွေး၊ တသံ၊ တမိန့် သဘော ဆောင်တဲ့ ပြဌာန်းချက်တော့မတွေ့ ရပါလား သူငယ်ချင်း။ တခုတော့ ရှိတယ်။ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် တည်ဆောက် ပြီ ဆိုရင်တော့ ဗဟိုချုပ်ကိုင် အမိန့် ပေးတဲ့ စနစ် Commanding System ရှိ၇မှာပေါ့။ အဲဒီ အထဲမှာ ကေအင်ယူလဲပါ လို့ ရတာဘဲ။ ဘာပြသနာ ရှိသလဲ။ တပ်ဆိုပြီးတော့ အဆင့်ဆင့်တောင် အမိန့် ပေးလို့ မရ၊ အောက်ခြေမှာ ကိုယ် ထင်ရာလုပ်နေကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး တိုင်းရင်းသားလူထုကို ကာကွယ်စောင့် ရှောက် နိုင်တဲ့တပ် ဖြစ်ပါ့မလဲ။
ဒီ နှစ်ပိုင်းကိုတော့ ခွဲခြားဘို့ လိုမယ်ထင်တယ်။
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် စတင်ဖွဲ့ စည်းသင့်တဲ့အချိန်နဲ့ ပတ်သက်လို့သူငယ်ချင်း နဲ့ ကိုယ် အမြင် မတူ တာကို ခွင့်လွှတ်ပါ။ ကိုယ့်သဘောကတော့ ဖွဲ့ စည်းသင့်တာကြာပြီ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ နောက်တောင်ကျနေပြီ။ ဒီကသွား ဖြဲ ပြလို့ ဟိုက အစွယ်ထုတ်ပြတယ် လို့ ကိုယ်မမြင်ဘူး။ ဟိုက အစွယ်ထုတ်ပြလို့ သည်က သွားဖြဲပြဘို့ကြိုးစားတဲ့ အဆင့်ဘဲရှိသေးတယ်။ ပြည်ထောင်စု အဆင့်မှာတောင် လက်မှတ်ထိုးထားပြီးပေမယ့် စစ်အစိုးရက ရှမ်းမြောက်ပိုင်းကတပ် တွေကို အကြိမ်ပေါင်းတရာကျော် တိုက်နေခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ သူတို့ ဘာဘဲလုပ်လုပ်ခေါင်း ငုံ့ ခံပြီး သူတို့ မကြိုက်တာမှန်သမျှ မလုပ်ရဲတဲ့ဘ၀တော့ မရောက်သင့်ဘူးထင်တယ်။ တကယ်တော့စစ်ဘီလူး၇ဲ့ အစွယ် ကို ရိုက်ချိုးသင့်ခဲ့တာကြာပြီ။
ဦးဟန်ရောင်ဝေ က ယူအင်န်အက်ဖ်စီ ကို ပြောင်ထုတ်ဖေါ်ဝေဘန် တိုက်ခိုက်တယ် လို့ ကိုယ်သုံးတဲ့ အပေါ် သူငယ်ချင်းက ဘ၀င်မကျဘူးထင်တယ်။ လူတိုင်းပြောခွင့်ရှိပြီး ဂရိ အေသင် တို့ က စလို့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလဲ ဒီလိုလုပ်မြဲဘဲ လို့ကြားထဲက၀င်ပြီး စောဒက တက်ပေးတယ်။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတွေမှာတော့ မှန်တာ ပေါ့။ အခုဟာက စစ်အာဏာရှင်စနစ် နိုင်ငံဘဲ။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဘုံရန်သူ လို သဘောထားနဲ့ ဆန့် ကျင်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ့် အချင်း ချင်း အတွင်းက ပြသနာတွေကို ကိုယ့်အတွင်းပိုင်းမှာ နည်းလမ်းရှာပြီး တမျိုးတဖုံရှင်းရမယ် လို့ ကိုယ်တော့မြင်တယ်။ အဲသလို မရှင်းဘဲ စစ်အာဏာရှင်တွေ အကြိုက်များ ဦးဟန်ရောင်ဝေ လုပ်မိနေပြီလား ဆိုတာကို စိုးရိမ်ပြီး ကိုယ်ကထောက်ပြတာဘဲ။
ဒီကိစ္စ သူငယ်ချင်းရဲ့ အမြင်က ဘယ်လိုလဲ။ ယူအင်န်အက်ဖ်စီ ကို ဝေဘန်တဲ့ ဦးဟန်ရောင်ဝေမှာတော့ လူတိုင်းရသင့်တဲ့ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခွင့်ရှိပြီး ကိုယ်က သူ့ ကိုဝေဘန်တာကို တော့ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခွင့် မရှိဘူး လို့ကိုယ့် အခွင့်အရေးကို ပိတ်ခြင်သလား။ သည်လိုဆိုရင်တော့ စိတ်မကောင်းစရာဘဲ။
မင်းရေးတဲ့ အောက်ပါစာပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်ရတော့ ကိုယ်တော်တော် အံ့သြမိတယ်။
“အတွေးအခေါ်မတူတဲ့ ဘက်နှစ်ဘက် ကိုစင်ပေါ်တင်ပြီး Television ရှေ့မှာသူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင်တွေကို ပြောခိုင်းရင်မကောင်းဘူးလားလို့ ကိုယ်စဉ်းစားမိတယ်။ခွန်ဥက္ကာတို့နိုင်ဟံသာတို့ကိုကိုယ်မေးကြည့်မယ်မင်းတို့လုပ်မလား။ သူတို့က လုပ်မယ်ဆိုရင် မင်းFacilitator လုပ်မလား သူငယ်ချင်း?။”
အထက်မှာ မင်းကို ကိုယ်ထောက်ပြခဲ့ပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်က အားကောင်းရှင်သန်ကြီးစိုး နေဆဲဘဲ။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့် ကျင်တဲ့ ကိုယ့်အချင်းချင်းကြားထဲမှာ မင်းတို့ အချင်းချင်းကြားထဲမှာ နားလည်မှု ညှိရမှာကို ဘာကြောင့် အာဏာရှင်တွေ ၀မ်းသာအောင် ပရိသတ် ဗိုလ်ပုံအလယ်မှာ ကိုယ့်အထုတ် ကိုယ် ဖြေပြရမှာ လဲ။ ဒီ အလုပ်တော့ ကိုယ် မလုပ်နိုင်ဘူး သူငယ်ချင်း။
တခုတော့ ရှိတယ်။ မင်းလေသံကို လေ့လာရတာ စစ်အစိုးရကို ပြောလို့ ဆိုလို့အတော်ရမယ့် သဘောရှိနေ တယ်။ ကိုယ်စကားပြောခြင်ရင် မင်းက ရန်ကုန်မှာ အစည်းအဝေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကတမျိုး၊ Television ရှေ့မှာ ပြောကြမယ် ဆိုတာက တဖုံ မဟုတ်လား။ ဒီတော့ ဒီလိုလုပ်ပါလား။ ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကို မင်းပြောကြည့်လေ။ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စ သူနဲ့ ကိုယ် Television ရှေ့မှာ အပြန်အလှန်ပြောကြမယ်။ လုံခြုံရေး ရှုဒေါင့်အပါအ၀င် ကြိုက်တဲ့ ရှုဒေါင့်ကနေ ဆွေးနွေး နိုင်တယ်။ မင်းက Facilitator လုပ်မလား။ဒီလိုပြောခွင့်ရအောင် စီစဉ်ပေးမယ် ဆိုရင် သိတ်ကို ကျေးဇူးတင်မယ်။
စိတ်ကူး မယဉ်စေခြင်ဘူး သူငယ်ချင်း။ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ရှိနေသမျှ ဒီမိုကရေစီ အတုအယောင်ဘဲရမယ်။ ဖက်ဒရယ် ဘယ်တော့မှ မရနိုင်ဘူး။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံအောက်မှာ ဘယ်တော့မှ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု မတည်ဆောက်နိုင်ဘူး။ အဲသလို ကိုယ်မြင်တယ်။ သူငယ်ချင်းရော အဲသလို အမြင်တူရဲ့ လား။ စစ်ခေါင်း ဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ တဲ့နေရာမှာ ခင်ဗျားတို့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို စွန့် လွှတ်ဘို့ လိုတယ်လို့ သူငယ်ချင်းကိုယ်တိုင်က ပြောခဲ့ တာများ ရှိခဲ့ရင် ကိုယ်က သိတ်ကို ကျေးဇူးတင်မှာဘဲ။ တောင်အာဖရိကမှာတော့ မန်ဒဲလားက ဒီကလပ်ကို ခင်ဗျားတို့ လူဖြူလူမဲခွဲခြားတဲ့ ၀ါဒကို စွန့် လွှတ်ဘို့ လိုတယ်လို့ အတိအလင်းပြောခဲ့တာဘဲ။ စွန့် လဲစွန့် လွှတ်ခဲ့ရတာဘဲ။
သူငယ်ချင်းရဲ့ စာနောက်ဆုံးအပုဒ်ကလေးကတော့ သိတ်ကို မင်္ဂလာရှိတာဘဲ။ ဘာတဲ့လဲ။
“ဒါတွေကိုကိုယ်ပြောနေတာ ဘယ်သူ့ကိုမှအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြစ် ရှာ၊ အပြစ်ဖို့၊အပြစ်ပြောနေတာမျိုးဟာ အကျိုးယုတ်တာကလြွဲပီးဘာအကျိုးမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ မင်းအားရင်လာခဲ့ပါအုံး။တို့တတွေအားလုံးနေရာတိုင်းမှာအမြင်မတူကြပေမယ့် စုစုစည်းစည်း အဖိုးအခပေးလုပ်ခဲ့တဲ့အကျိုးကြောင့်ဒီအခြေအနေကိုရောက်လာနေပြီ။ဆက်ပြီးကြိုးစားကြည့်ကြစို့ ။”
သူငယ်ချင်းပြောတာ ရာနုန်းပြည့် သဘောတူတယ်။ ဖိတ်ခေါ်တာလဲ ၀မ်းသာတယ်။
ကိုယ်လဲ လာခြင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀တ္တရားကြေလောက်၊ ကိုယ့်ကို ချွေးသိတ်ဖို့ လောက် ဖိတ်တာမျိုး တော့ မဖြစ်စေခြင်ဘူး။ ကိုယ့် ဥပဒေပညာကို တန်ဘိုးထားတယ် ဆိုရင် ကေအင်ယူ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ သို့ မဟုတ် ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ တရားဝင်ဖိတ်စေခြင်တယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ ကခရီးစရိပ်တော့ ကျခံရမှာပေါ့။ တခုတော့ရှိတယ်။ တောထဲကိုလမ်းလျှောက်ရမယ့် နေရာကိုတော့ မသွားနိုင်တော့ဘူး။ ကားနဲ့ သွားလို့ရမယ့်နေရာလောက်ဘဲ ရောက်နိုင်မယ်။ ကြီးကျယ်တာ လုံးဝ မဟုတ်ဘူး သူငယ်ချင်း။ မင်းလဲတောတွင်းတိုက်ပွဲ တနေရာမှာ စစ်အစိုးရရန်သူ့ လက်နက်ကြီးကျည် အနီးကပ်ကျ ရောက်ပေါက် ကွဲပြီး နားတွေပျက်စီးကုန်တာကို ကိုယ်သိတယ်။
ကိုယ်လဲ ၁၉၇၄ အလုပ်သမားအရေးအခင်း ဆန္ဒပြပွဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်း ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးနဲ့ အတူ ပါခဲ့တာကြောင့် သေနတ်မှန်ခံရ၊ ကျည်ဆန်က ခြေဖ၀ါးကနေ ဖြတ်ဖေါက် ခြေသလုံးရိုး သွင်သွင်ကျိုးသွားခဲ့၊ မင်္ဂလာဒုံ စစ်ဆေးရုံက ကုပေးခဲ့လို့ ပြန်ကောင်းခဲ့ပေမယ့် အခု အသက်ကြီးပိုင်းရောက်လာတော့ ခြေသလုံးက ကျည်အပိုင်းအစတွေ ပြန်ထွက်လာ၊ဒဏ်တွေပြန်ပေါ်ပြီး လမ်းမနည်းလျှောက်ရတဲ့ ဘ၀ရောက်နေတယ်။ ဝေးဝေးလျှောက်လို့ လုံးဝမရတော့ဘူး သူငယ်ချင်း။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကို မသေမချင်းတော့ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ အတတ်ပညာတွေနဲ့ ဆက် တိုက်သွားဦးမယ်။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးပြသနာကို တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးရှုဒေါင့်ကနေ အထူးတလည် ကာကွယ် ရှာဖွေသွားမယ်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေး နဲ့ လူ့ အခွင့်အရေး အခြေခံတွေ ကို နိုင်သမျှ ၀ိုင်းဝန်းတည်ဆောက်သွားမယ်။ ဒါကိုတော့ ကတိပေးလိုက်တယ်။
အိပ်ဖွင့်ပေးစာ အပြန်အလှန်ရေးတာတော့ ဒီလောက်ဆိုတော်လောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
ဥပဒေအထောက်အကူပြုကွန်ရက် တည်ထောင်သူ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်
နေ့စွဲ - ၂၀၁၄ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၂)ရက်
အကြောင်းအရာ။ ​​။ သူငယ်ချင်းထံသို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာ။
မင်းမှတ်မိသေးမယ်လို့ထင်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဗိုလ်မြကKNUကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၊ ကိုယ်ကဒုတိယအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အနေနဲ့ ယခင်နအဖနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မသွားခင်မင်းငါ့ကိုမဲဆောက်မှာပြောသွား တဲ့ စကားလေ။"မင်းတို့မှားလိမ့်မယ်" တဲ့။
၂၀၀၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ(၁၆)ရက်နေ့မှာ KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဘန်ကောက်ကနေ လေယဉ်စီးပြီးရန်ကုန်ကိုသွားခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဗ်ိုလ်မြက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား KNU ရဲ့သဘောထားကိုပြောပြတယ်။ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယို အခွေတွေရှိပါသေးတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်က "ဖထီးရာ - နောင်ဆိုရင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာ ဒီတိုင်းပြည်မှာမရှိတော့ပါဘူး" လို့ပြန်ပြောခ့တဲယ်။ အဲဒီ စကားဟာ သူ့အတွက်အထက်ကဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးနဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတို့ရဲ့အမျက်တော်ရှခြင်းဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ဒီလိုနီးနီးကပ်ကပ် လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသိရှိခွင့်ရခဲ့တယ်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွင်းမှာ ဒို့ KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မော်လမြိုင်မြို့ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် အတွင်းမှာညှိနှိုင်းဆွေးနေွးပွဲလုပ်ခဲ့ပြန်တယ်။ KNU ဘက်ကကိုယ်ခေါင်းဆောင်ပြီး နအဖ ဘက်ကတော့ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်သိန်း ဦးဆောင်ခဲ့တယ်။အဲဒီလိုဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာပဲ ဒို့တပ်မဟာ (၃)က တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတပ်မတော်ရဲ့ ဒုံဇရစ် တပ်ရင်းစခန်းကို တက်သိမ်းပြီးလက်နက်မျိုးစုံ (၃၉)လက် သိမ်းဆည်းရယူခဲ့တယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးကာလအတွင်း ဒီလိုဖြစ်တာအင်မတန်အရုပ်ဆိုးတယ်။ လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စဘဲ။ ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဗိုလ်မြက ကိုယ်တို့ကိုချက်ချင်းညွှန်ကြားချက်ပေးလိုက်တယ်။
(၁) လက်နက်တွေအားလုံးပြန်ပေးမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါ။
(၂) မှားယွင်းလုပ်ဆောင်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါ။ (၃) တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမပျက်စီးဘဲဆက်လက်လုပ်သွားနိုင်ဖ်ို့လုပ်ကြပါ။
စစ်လည်းတိုက်ရဲတယ်၊ငြိမ်းချမ်းရေးလည်းလုပ်ရဲတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဘယ်သူဘာပြောပြော ဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဆက်လုပ်မှာဘဲ။ သူ့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းသူ့ရည်မှန်းချက် ရောက်အောင် မဖြစ်မနေလုပ်မှာဘဲ။သူ့အကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘူး၊ အများအကျိုးအတွက်ဘဲ။ ဒါကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဗိုလ်မြက သက်သေပြခဲ့တယ်။
​ဒီလိုနဲ့ အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာ နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနေွးဖို့အတွက်ရန်ကုန်ကိုသွားခဲ့ရပြန်တယ်။ ကိုယ်ကဦးဆောင်ပြီး ကိုယ်ဒို့ ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှာတိုးလာတဲ့အဖွဲ့ဝင်သစ်တစ်ယောက် ကတော့ အဲဒီတုန်းကဒူးပလာယာခရှိုင် ဥက္ကဌလည်းဖြစ်၊ တပ်မဟာ (၆)မှူးလည်းဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ် စောမူတူးစေးဖိုးဘဲ။ ဒို့ရန်ကုန်မရောက်ခင်လေးမှာဘဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်နဲ့ကကလှမ်းတစ်ဖွဲ့လုံး အဖျက်ခံရ၊ အဖြုတ်ခံရ၊အဖမ်းခံရနဲ့ရှုတ်ကုန်တော့တာဘဲ။ ဒို့တတွေအတွက်လည်းပြည်တွင်းပြည်ပကလူအတော်များများ စိုးရိမ်ခြဲ့ကတယ်။ အဲဒီအထဲမှာမင်းပါသလားသူငယ်ချင်း?
ဒါတောင်မှ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးမပျက်သေးပါဘူး။နောက်ထပ်ပြီး ၂၀၀၅ခုနှစ် မတ်လအတွင်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို မော်လမြိုင်မြို့အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလုပ်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ကဦးဆောင်ပြီး နအဖ ဘက်က ဦးဆောင်သူအသစ်ဖြစ်သွားတယ်။အရှေ့တောင်တိုင်းစစ် ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်သူရမြင့်အောင်ဘဲ။ နောက်တစ်ကြိမ် နှစ်မကုန်ခင်အတွင်းမှာအလွတ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု မြဝတီမြို့ တွင်းမှာလုပ်တယ်။ပဒို ဒေးဗစ်တော ဦးဆောင်ပြီးသွားခဲ့တယ်။
အကျဉ်းချုပ်သုံးသပ်ကြည့်ရင် အဲဒီတွေ့  ဆုံဆွေးပွဲတွေကဘာအဖြေမှ မယ်မယ်ရရ မထွက်ခဲ့ပါဘူး။လူကြီးလူကောင်းသဘောတူညီချက်လို့ခေါ်တဲ့ Gentlemen Agreement နဲ့ဘဲ လုပ်သွားကြရတယ်။ ကိုယ်တို့ကိုတချို့လူတွေက လက်နက်ချဖို့၊ အညံ့ခံဖို့ လုပ်နေတဲ့လူပျော့လူညံ့တွေလို့ပြောကြတယ်။ သစ္စာဖောက်မဲ့ လူတွေလို့စွပ်စွဲခဲ့ကြတယ်။ ဘာပြဲဖစ်ဖြစ်လေ - ဒါသူတို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ဘဲ။ သူတို့ပြော ကြမှာပေါ့။
ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုကတော့ ၂၀၀၄ နဲ့ ၂၀၀၅ - နှစ်နှစ်လုံးလုံး ဘာတိုက်ပွဲမှ မဖြစ်လို့ ရှေ့တန်းကပြည်သူလူထုတွေ သက်သာရာ ရတာကိုတော့ကိုယ်ကျေနပ်မိတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လမ်းစပွင့် မလား လို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အပေါ်တွေ့ဆုံဆွေးနေွးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး စာတွေ့၊လက်တွေ့အတွေ့အကြုံ တွေကို တော်တော်များများရခဲ့တယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထွက်ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာခွင့်ရ တဲ့ အခါ ဒီအတွေ့အကြုံတွေက အများကြီးအကျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့် - " ငါတို့မမှားဘူး။ လုံးဝကိုမမှားဘူး - သူငယ်ချင်းရေ"။
ဒီအတွေ့အကြုံတွေ၊ ဒီလေ့လာမှုတွေကြောင့် ဆက်လက်ပြီးအခုအချိန်အထိ ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရတုန်း ဘဲ။
"Do not fear to negotiate. Do not negotiate out of fear." ဆိုတဲ့ အမေရိကန် သမ္မတကြီး Franklin D. Roosevelt ရဲ့စကားနဲ့ "I kill my enemy by making him my friend" ဆိုတဲ့ အမေရိကန် သမ္မတကြီး Abraham Lincoln ရဲ့စကားဟာကိုယ့်ရဲ့လက်စွဲပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး အဆိုအမိန့်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ Commander in Chief ပြောတဲ့ "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." – Matthew5:9(NIV).
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်လို့အသတ်ခံရတဲ့လူတွေ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာမနဲတော့ပါဘူး။ ဒို့ရဲ့ ဥက္ကဌကြီးလည်းဘယ်တော့အသတ်ခံရမလဲမသိဘူး။ အပုတ်ချ၊ အပြစ်ပြော၊နာမည်ဖျက်ခံနေရတာကတော့ နေ့တဓူဝဘဲ။ Character Assassination လုပ်တာခံနေရတာကြာပြီး။ ဒါပေမယ့် ဒို့ဥက္ကဌကြီးနဲ့ သူ့ လူတွေကတော့ - "When the going's tough, the tough get going" ဘဲ။
ဒါကြောင့် ကိုယ်အကြံပြုချင်တာကတော့ "Never Say Never" ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်ခုကတော့ အခု ဒို့ KNU တတွေလုပ်နေတာကိုအမှန်တကယ်သိချင်ရင်ကိုယ်ဒို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးပြောဆိုဆွေးနွေးစေလိုပါ တယ်။ ဒါမှဒို့ဘာတွေလုပ်နေတာကိုသိပြီး ကောင်းမွန်တဲ့အကြံကောင်းတွေပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ UNFC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဘဲ။၂၀၁၀ခုနှစ်အတွင်းက "BGF လုပ်ရင်လုပ်၊မလုပ်ရင်စစ်ရေးအရအရေးယူခံရမယ်"ဆိုတဲ့တစ်ချက်လွတ်အမိန့်ကိုအဲဒီအချိန်ကအပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေရရှိခဲ့ တယ်။KNUအတွက်တော့အပစ်မရပ်ဘဲတောက်လျောက်တိုက်နေတဲ့အတွက်ဘာမှပြသနာမရှိဘူး။ တခြားတိုင်းရင်သား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် EBO က ဆရာကြီးဟန်ရောင်ဝေနဲ့ ဗစ်တာ ဗျက်လျန်၊ ENC က ကိုယ်နဲ့ဒေးဗစ်တောတို့စိတ်ပူပြီးအဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် အစည်း အဝေးတစ်ရပ်ကို KIO ဌာနချုပ် လိုင်ဇာမှာလုပ်ဖို့စီစဉ်ခြဲ့ကတယ်။ဆရာကြီးဟန်ကဦးဆောင်ပြီးကိုယ်တို့က ဝိုင်းကူကြတယ်။အဲဒီအစည်းအဝေးကို KNUဘက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူးစေဖိုး၊ဗိုလ်မှူးချုပ် စောအိုင်း ဇက်နဲ့ပဒိုစောဒေးဗစ်တောတို့တက်ရောက်တယ်။ EBO ဘက်ကဆရာကြီးဟန်နဲ့ ဗစ်တာဗျက်လျန်တို့ တက်တယ်။ တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ချို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်။အကုန်အကျကို (EBO)က အကုန်ခံတယ်။ကိုယ်ကတော့ခရီးလွန်လို့မသွားဖြစ်ဘူး။ အဲဒီလုပ်ရှားမှုကြောင့် ဖက်ဒရယ်ပြည် ထောင်စု ပေါ်ထွန်းရေးကော်မတီ (Committee for Emergence of Federal Union)ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲတယ်။စစ်ရေးအရ အချင်းချင်းအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အဓိကလုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာဘဲ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဆိုတဲ့ နိုငင်ေံရးရည်မှန်းချက်ကိုဦးတည်ထားတယ်။ အဲဒီ CEFU ရဲ့ဥက္ကဌ ဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးစေးဖိုးဘဲ။
စစ်ရေးအတွက်ဘာမှ ဟုတ်တိပတ်တိ၊ မယ်မယ်ရရမလုပ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာဘဲ "ကြီးမားကျယ် ပြန့် တဲ့တပ်ပေါင်းစုကြီးဖွဲ့စည်းရေး" ဆိုတဲ့ Idea ဝင်လာတယ်။ယူလာသူကတော့ နိုင်ဟံသာပဲ။ UNFC ဖွဲ့ရေးဘဲ။အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး KIO ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အန်ဘာလ က ကိုယ်နဲ့ဒေးဗစ်တောကို အကြံပေးဖို့ အစည်းအဝေးမှာ ဖိတ်ခေါ်တယ်။ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်လုံးက မဖွဲ့ဖို့ပြောတယ်။စစ်ရေးကိုအဓိကထား ဝိုင်းလုပ်ယင်း၊ ဝိုင်းကာကွယ်ယင်းနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းအားလုံး လက်ခံနိုင်တဲ့ဘုံအခြေခံတစ်ရပ် (Common Ground) ကို ချမှတ်ပြီးမှတပ်ပေါင်းစုတစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းဖို့အကြံပြုခဲ့တယ်။ တစ်သွေး၊တစ်သံ၊ တစ်မိန့် ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အန်ဘာလကလုပ်ချင်တယ်။ ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ တပ်ပေါင်းစုသမိုင်းတစ်လျောက်လုံးမှာတွေ့ခဲ့ရတာဘဲ။နောက်ဆုံးတော့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဆိုတဲ့အခြေခံ ပေါ်မှာအဖွဲ့တွေစုပြီးတပ်ပေါင်းစုလုပ်လိုက်တော့အခုလိုဖြစ်လာတာဘဲ။ပြောင်းလဲလာတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေ အနေ အရ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံး တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းသဘောတူတဲ့အခြေခံပေါ်မှာ ရပ်တည်ပြီး အခြားတစ်ဖက်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမယ့်အစား တပ်ပေါင်းစု တစ်ခုကဦးဆောင်ပြီးကျန်အဖွဲ့တွေ က လိုက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အင်အားကြီးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ဒါမျိုးကိုလက်မခံဘူးဆိုတာကြိုမမြင်ဘူးနဲ့တူတယ်။
နောက်တစ်ခုက စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုမတူကြွဲပားခြားနားတဲ့အခြေခံပေါ် (Unity in Diversity) မှာလုပ်ရမှာဘဲ။ တစ်သွေး၊ တစ်သံ၊ တစ်မိန့်ဖြစ်တဲ့တစ်ပုံစံတည်းသော ညီညွတ်ရေး (Unity in Uniformity) နဲ့လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒီသဘောတရားကို လက်မခံတော့အခုထင်ထင်ရှားရှားဒီလိုဖြစ်လာရတာဘဲ။
အခြားတစ်ခုကတော့မင်း UNFC ရဲ့ Constitution ကိုသေသေချာချာလေ့လာကြည့်ပါ။ မင်းတွေ့ရ ပါ လိ်မ့်မယ်။ KNU ရဲ့Constitution နဲ့ Constitutional Rule ကိုလေ့လာချင်ရင်ပို့ပေးမယ်။ နှိုင်းယှဉ်ပြီး လေ့လာကြည့်ပါ။
NCCTနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင် ပထမလိုင်ဇာအစည်းအဝေးမှာဖွဲ့ခဲ့တယ်။ UNFC ကဖွဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း (၁၆)ဖွဲ့ကဖွဲ့တာပါ။ နငိုငံရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး NCCT ကိုဦးဆောင်ဖို့ပြောတော့ UNFC ကဦးဆောင်လို့မရဘူးလားလို့မေးတယ်။ဦးဆောင်မှုပေးခြင်းမခံရတော့ နောက်ဆုံး အဖွဲ့ (၁၆) ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကပဲ စုစည်းပြီး ဦးဆောင်မယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခါ လော်ခီးလာအစည်းအဝေးနဲ့ ဒုတိယလိုင်ဇာအစည်း အဝေးမှာ လည်းဘဲ ခေါင်းဆောင်မှုပေးခြင်းမခံခဲ့ရဘူး။ဒါကြောင့် နောက်ဆုံး UNFC ကွန်ဂရက်မှာ အတင်း အကျပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြတာဘဲ။ ကွန်ဂရက်တက်ရောက်တဲ့တစ်ချို့ကိုယ်စားလှယ်တွေက NCCT ကို UNFC ကအပိုင်စီးတယ်။ (Hijack) လုပ်တယ်လို့ပြောကြတယ်။တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် (ကရင်မဟုတ်ပါ) တစ်ဦးကတော့ခါးခါးသီးသီးနဲ့ "နိုင်ငံရေး မုဒိန်းကျင့်တာဘဲ" လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့တယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် UNFC အဖွဲ့ ဝင်(၁၁)ဖွဲ့ကNCCTအဖွဲ့ဝင် KNU အပါအဝင်(၅)ဖွဲ့ကို ဝိုင်းပြီး ပြုကျင့်တာဘဲ။ဒါလုပ်သင့်သလား သူငယ်ချင်း။
ဒါ့အပြင် "……UNFC သည်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ၏ တစ်ဖွဲ့တည်းသောနိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှေုပးနိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်" လို့ပြောရင်ဖြစန်ငိုပ်ါမ့လား။ (အဲဒီလျှို့ဝှက်လို့ သတ်မှတ် ထားတဲ့စာတစ်စောင်ကို လက်မှတ်မထိုးဘဲ ဖြန့်ဝေထားတာရှိတယ်။စာမှန်မမှန်ကိုယ်မပြောလိုဘူး။ အဲဒီလိုအကောင်အထည်ဖေါ်နေကြတာတော့အမှန်ဘဲ။လုပ်ရပ်ကိုကြည့်ရင် သိသာပါတယ်။ မျက်စိမြင်၍ ကြည့်တတ်သောသူသည် မြင်သည် ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်)။ တစ်ခုရှိသေးတယ် ဒီနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၂)ရက် နေ့ရန်ကုန်မြို့ ယုဒသန် ခန်းမမှာ KNU ခေါင်းဆောင်များနဲ့ကရင်လူထုတို့ တွေ့ဆုံပွဲကို ကျင်းပခဲ့တာမှန်တယ်။ ကိုယ်လည်းဒီအစည်းအဝေးတက်ခဲ့တယ်။ UNFC အကြောင်းပြောဖို့ ကိုယ်တာဝန်ယူထားတယ်။
ဆရာကြီး ဟန်ကကိုယ်တို့နဲ့တောက်လျောက်တွဲလုပ်ခဲ့တာ ကြာခဲ့ပြီ။ UNFC အကြောင်းကိုကရင် မဟုတ်တဲ့ ရှမ်းအမျိုးသားပညာတတ်တစ်ယောက်၊တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးလောကတွင်လူသိများသူတစ်ဦး၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာ ကျွမ်းကျင်နားလည်သူ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောစေချင်လို့ကိုယ်အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်။ UNFC ကိုဗြောင်ထုတ်ဖော် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ပြောတာထက်သူ့ရဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ကို ဖော်ထုတ် တယ်လို့ကိုယ်ကပြောချင်တယ်။ လူတိုင်းလဲပြောခွင့်ရှိတာဘဲ။အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ဒီလိုလုပ်မြဲမဟုတ်ဘူး လား။ ဂရိတို့၊အေသင်နိုင်ငံတွေခေတ်မှာပင် လုပ်ခြဲ့ကတာဘဲ။မင်းလဲပြောချင်ရင်ရန်ကုန်မှာ ကိုယ်အဲဒီလိုမျိုးအစည်းအဝေးလုပ်ပေးပါ့မယ်။ ကိုယ်နဲ့အမြင်တူတူမတူတူမလိုပါဘူး။ တက္ကသိုလ်တုန်းက အစ္စရေးနဲ့ အာရပ်သံအမတ်ကြီးတွေခေါ်ပြီး မတူတဲ့သူတို့အမြင်တွေထုတ်ဖော်ပြောကြဖို့ ဒို့ ဥပဒေဌာနမှာလုပ်ခဲ့ကြ တာ ကိုကိုယ်မြင်ယောင်မိသေးတယ်။ အတွေးအခေါ်မတူတဲ့ဘက်နှစ်ဘက် ကို စင်ပေါ်တင်ပြီး Television ရှေ့မှာသူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင်တွေကို ပြောခိုင်းရင်မကောင်း ဘူးလားလို့ကိုယ်စဉ်းစားမိတယ်။ ခွန်ဥက္ကာတို့နိုင်ဟံသာတို့ကိုကိုယ်မေးကြည့်မယ် မင်းတို့လုပ်မလား။သူတို့က လုပ်မယ်ဆိုရင် မင်း Facilitator လုပ်မလားသူငယ်ချင်း?။
နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဟာ တို့တတွေအားလုံးရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပါ။ မင်းတို့ဗမာတွေလည်းပါတာဘဲ။အဲဒီအတွက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ ပေါ်လာ ရင်အခြေခံအနေနဲ့ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ အဆိုပြုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်းကို တို့တတွေရေးခဲ့ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ DAB ရဲ့မူကြမ်း ကနေ NCUB ရဲ့ ပထမ မူကြမ်း ဖြစ်သွားတာကတစ်ခု။နောက်တစ်ခုကတော့ ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း) ရေးဆွဲရေးနှင့် ညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ (FCDCC) ကတစ်ခုပေါင်းနှစ်ခုရေးဆွခဲ့ကြတယ်။ နှစ်ခါစလုံးကိုယ်ပါခဲ့ တယ်။အဲဒီနှစ်ခု စလုံးမှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ဖွဲ့စည်းရေးလဲပါတယ်။ဘယ်အခြေခံပေါ် မှာဖွဲ့မယ်၊ ဘယ်လို ဖွဲ့မယ် မစှ၍ပြည့်ပြည့်စုံစုံစဉ်းစားထားကြတယ်။ ဒါကိုနိုင်ငံရေးဆွေးနေွးပွဲမှာဆွေးနွေးပြီး အဖြေရှာဖို့ပဲလို့ တို့တတွေခံယူထားကြတယ်။ချက်ချင်းဖွဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူး။ အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ (Federal Union Army) ကို ဖွဲ့ပြလိုက်တော့ အခြားတစ်ဖက်ကိုစိန်ခေါ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတာပဲ။ ဒီလိုမျိုး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဘာ မှ မယ်မယ်ရရ မဆွေးနွေးနိုင်သေးခင်မှာ၊ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ ဒီလိုလုပ်ပြလိုက် တာ နိုင်ငံရေးအရ မှန်မမှန်မင်းဘဲဆုံးဖြတ်ပါ။ ဒီကသွားဖြဲပြတော့ဟိုကအစွယ်ထုတ်ပြတာ သဘာဝပါဘဲ။
ဒါကဘာလဲဆိုရင် သဘောထားတင်းမာသူ (Hardline) တွေရဲ့ ဇာတိပြတာဘဲ။ ဒီအတိုင်းဆက် သွား ရင်တော့ဒို့တိုင်းပြည်ကြီး လမ်းမမြင်၊ ကမ်းမမြင်နဲ့ ဘယ်သောင်မှာတင်ပြီး၊ဘယ်ကျောက်ဆောင်နဲ့ တိုက်မလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှပြောနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ ဤလည်းတစ်ဒုက္ခပါဘဲလေ။
ကော်သူးလေတပ်မတော် (Kawthoolei Armed Forces) ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကလဲထွက်လာပြီ။ အောက်တိုဘာလ(၂၃-၂၅)ရက်နေ့မှာ KNU ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီအစည်းအဝေးက UNFC နဲ့ KAF ကိစ္စကိုကိုင်တွယ်တော့မယ်။ ဘယ်လိုအဖြေထွက်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြစို့။ကိုယ်ဗဟိုအမြဲ တမ်းကော်မတီ ဥက္ကဌနဲ့ဗဟိုကော်တီဝင်အားလုံးအတွက်စာတစ်စောင်ပို့ထားတယ်။မင်းသိအောင် ကိုယ်ပို့ပေးလိုက်မယ်။
ဒါတွေကိုကိုယ်ပြောနေတာ ဘယ်သူ့ကိုမှအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်အပြစ်ရှာ၊ အပြစ်ဖို့၊ အပြစ်ပြောနေတာမျိုးဟာအကျိုးယုတ်တာကလြွဲပီး ဘာအကျိုးမှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီတော့မင်းအားရင်လာခဲ့ပါအုံး။တို့တတွေအားလုံးနေရာတိုင်းမှာအမြင် မတူကြပေမယ့်စုစုစည်းစည်း အဖိုးအခပေးလုပ်ခဲ့တဲ့အကျိုးကြောင့်ဒီအခြေအနေကိုရောက်လာနေပြီ။ဆက်ပြီးကြိုးစားကြည့်ကြစို့ ။
Posted by PNSjapan at 5:51 PM